सोच बदलौँ, सकारात्मक अभियान चलाऔँ « प्रशासन
सोच बदलौँ, सकारात्मक अभियान चलाऔँ
प्रकाशित मिति : 13 May, 2020 2:57 pm
डा. योगी विकाशानन्द भन्नुहुन्छ— ‘सोचकै कारण सकारात्मक पनि नकारात्मक हुन्छ, त्यही सोचका कारण नकारात्मक पनि सकारात्मक हुन सक्छ । त्यसैले आफूmलाई बदल्न पहिले सोच बदलौँ, अर्थात् सकारात्मक सोच आरम्भ गरौँ ।
हामी बाँचेको संसार आज पुरै शङ्काको भरमा बाँचेको छ । जति शङ्का बढ्यो त्यति नै नकारात्मक सोच बढ्दो रहेछ । जति नकारात्मक सोच आयो, त्यति नै स्वयं नकारात्मक सोच बनाउने व्यक्तिदेखि सिङ्गो समाज, राष्ट्र र विश्वलाई यसले प्रभाव पार्दो रहेछ । नकारात्मक सोचले मानिसमा नकारात्मक ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । यही नकारात्मक ऊर्जाका कारण शारीरिक र मानसिक रूपमा नराम्रो प्रभाव पार्ने हानिकारक हर्मन उत्पादन हुने हुनाले दीर्घ रोग बढेको हो । नकारात्मक सोचका विषयमा हामी अनेक उदाहरण हेर्न सक्छौँ ।
नकारात्मक सोचाइका कारण व्यक्ति व्यक्तिमा मनमुटाब सुरु हुन्छ । साथीभाइमा मात्र द्वन्द्व हुने होइन, श्रीमान्–श्रीमतीबिच सम्बन्ध विच्छेद, पारिवारिक विघटन, छरछिमेक तथा आफन्तहरूमा बोलचाल, बर व्यवहार, बन्द, समुदाय, सम्प्रदाय, पार्टी, समूह, गाउँठाउँबीच अविश्वास र द्वन्द्व एवम् समाजका हरेक क्षेत्र क्षतविक्षत हुने मूल कारण नै नकारात्मक सोचको परिणाम हो । गाउँघरमा हुने सामान्य झगडादेखि विश्वयुद्धसम्मका घटना र द्वन्द्वहरू नकारात्मक सोचले भएका हुन् । आज ठुलठुला जातीय द्वन्द्व क्षेत्रीय, अन्तर्देशीय हुँदै महादेशीय द्वन्द्वहरू शङ्का र नकारात्मक सोचका परिणामले भएका देखिन्छन् । सधैँ नकारात्मक विचारले दिमाग भरिएको छ भने उसले जेलाई पनि नकारात्मक देख्न थाल्छ । त्यसैले परिवर्तनका लागि नकारात्मकताभित्रबाटै सकारात्मक सोचको अभियान सञ्चालन गरौँ ।
हामी कहिलेकाहीँ कुनै वस्तु अर्कै शङ्का लागेर झसङ्ग हुन्छौँ । बाटोमा हिँड्दै जाँदा कुनै सोचमा डुबेका छौँ भने मनमा सोचाइको त्यही भाव दृष्टिमा पनि झल्कन्छ । जस्तो— हामीले सर्पबारे सोचेर हिँडेमा त्यहाँ लत्रिएको कुनै डोरी, झार, त्यान्द्रो आदिलाई सर्प देख्छौँ र तर्सन्छौँ । हाम्रो मनको शङ्काले मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पार्दा त्यसले दृश्यमा पनि असर गर्नाले डोरीलाई सर्प देखिएको हो ।
कुनै बेला नेकपा (माले) को महासचिव रहेका सिपी मैनालीले २०४८ सालमा झापाको क्षेत्र नं. ५ बाट संसदीय चुनाव लड्ने अठोट गर्नुभयो । तर उहाँको दिमागमा अर्कै शङ्का वा भ्रम रहेछ— ‘आफू यो समाजको १ नं. नेता भएकाले चुनाव हार्न मिल्दैन, अरूले हारे हारुन्, आफू चाहिँ नहार्ने ठाउँमा उठ्नुपर्छ ।’ त्यस समय आस्थाको पार्टीको मत सर्वेक्षणमा नेपालभर सबैभन्दा धेरै मत त्यही क्षेत्रमा देखियो । तर, शङ्का वा सोचाइका कारण उहाँलाई कहीँ, कसैसँग विश्वास रहेनछ । हुन त उहाँलाई जहाँ पनि चुनाव लड्न सक्ने र जित्न सक्ने अवस्था थियो । त्यहाँ उहाँको भित्री डर वा शङ्काले काम ग¥यो । चुनाव हार्नु र जित्नु ठुलो विषय होइन, जित वा हार स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जनताको विश्वास जित्न सके चुनाव पनि जितिन्छ, जनविश्वास नभए चुनाव हारिन्छ । तर उहाँलाई त्यो विश्वास थिएन । त्यसैले ‘धेरै मत भएको छानेमा चुनाव जितिन्छ’ भन्ने परेको रहेछ । पछि उहाँले टिकट लिएर आउनुभयो । हामी चुनावमा लाग्यौँ । चुनाव मध्यतिर पुग्दै थियो । उहाँको भाषणमा यी हाम्रा ‘आइमाईहरू’ भन्ने शब्द पटक पटक व्यक्त भयो । उहाँ समयको ख्यालै नगरी बोल्ने । कोही पिसाब फेर्ने वा काम विशेषले सभाबाट उठेमा ‘मेरो भाषण नसुन्ने’ भनेर कुदेर गएर कुर्सीमा बस्ने । फेरि हामी जनतालाई जबरजस्त बसाएर भाषण गर्न लगाउँथ्यौँ ।
एक दिनको घटना हो, बाँसबारी कोमल दुलालकहाँ वास बस्ने कार्यपालिका थियो । हामी हरेक दिनको चुनाव प्रचारप्रसार सकेर बेलुका खाना खाने र वास बस्ने ठाउँमा दिनभरको समीक्षा बैठक बस्ने, कमीकमजोरी भएका सच्याउने पनि गथ्र्यौं । त्यहाँ पनि बेलुका ६ बजेतिर बैठक सुरु भयो । बैठकमा उहाँले भनेको शब्द यी ‘हाम्रा आइमाईहरू’ भन्ने ठाउँमा “समाजका ‘आमा, दिदीबहिनीहरू’ भन्दा राम्रो हुन्छ, यसले त महिलाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो, सबैले गिल्ला गरे” भन्ने कुरा राखेको थियौँ । ७ बजेतिर सुरु भएको थियो त्यो बैठक । उहाँबाट ‘म यो पार्टीको महासचिव भएको मानिस, मैले भनेको सत्य हो । मैले जे बोले पनि तिमीहरूले मान्नुपर्छ’ भन्ने तर्कसहितको अड्डी आयो— “मैले आइमाईहरू भनेको ठिक छ ।” हामीले पनि त्यो फेर्न अनुरोध गर्‍यौँ । उहाँले केही गर्दा मान्नु भएन ।
हाम्रो खाना पाकेर ८ बजेदेखि खान बोलाएको तर एउटै शब्दले रात बिताउने भयो । आदर्णिय नेता सिपी र हाम्रो दृष्टिकोणमा फरक भई शङ्का भएपछि रातको ३ बजेसम्म खाना नखाई बैठक लम्बिएको थियो । त्यहाँका अधिकांशले ठिकै कुरा भनेका थिए तर उहाँलाई शङ्का पर्‍यो । ‘मैले अरूको तर्क स्वीकार गरेँ भने कमजोर हुन्छु र चुनाव हार्छु’ भन्ने परेछ क्यारे ! केही गर्दा पनि उहाँले बदल्ने सङ्केत देखिएन । एउटा शब्दको शङ्काले सिपीलाई खायो । चुनावमा खुसीसाथ भोट दिने मतदातालाई पनि उहाँले मनै अमिलो बनाइदिनुभयो । त्यो उहाँको सोच नबदल्ने परिस्थितिको परिणाम थियो ।
हामीले सकारात्मक विषयलाई नकारात्मक तरिकाले सोच बनायौँ भने परिणाम पनि नकारात्मक आउँछ । नकारात्मकताको असर कति डरलाग्दो हुन्छ र त्यसले कस्ता घटना, दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने एउटा सानो तर यथार्थ उदाहरण हो यो । शङ्का मानिसको डरलाग्दो शत्रु हो ।
कार्यकर्ताले राखेको एउटा शब्दमा उहाँको ‘सकारात्मक सोच’ नबन्दा हाम्रो बैठक ६–७ घण्टा अनावश्यक लम्बियो । पाकेको खाना खान नपाएर हामी भोकै हुनाले शरीरलाई क्षति पुग्यो भने उता भान्सेहरूले पनि खान पाएनन् । सबैको निद्रा बिग्रियो । समयमा नयाँ कामको योजना बनेन । त्यसको प्रभाव चुनावभरि पर्‍यो । भोलिपल्टदेखि ‘चुनाव हराउँछन्’ भन्ने परेर बोल्नै छोडे । त्यहाँको छलफलले गाउँमा नकारात्मक सन्देश गयो भने उता दिनरात खटेका कार्यकर्ताको मन नराम्ररी कुँडियो । कतिपय कार्यकर्ताले उहाँको आफ्नै व्यवहारका कारण सीपीप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन खोजे पनि उनलाई हामीले शानदार मत दिलाएका थियौँ ।
चुनाव जिताएर गरिएको विजय सभामा उहाँले ‘चुनाव जिताउन अहोरात्र खट्ने, त्यो ठाउँ नेपालमै १ नं. मा पु¥याउन दशौँ वर्षदेखि काम गरेका नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने’ घोषणाले विजयसभा शोकसभमा परिणत भए जस्तै भयो । खुसी र उमङ्ग बोकेर गएका जनता, कार्यकर्ता सीपीको भाषणबाट रुँदारुँदै घर फर्केका थिए । त्यसपछि झापाको ५ नं. मा कहिल्यै पाइला टेक्नु भएन । सिपी मैनालीले सायद अब माननीय त के, वडा अध्यक्ष पनि जित्नु हुन्न जस्तो लाग्छ अहिले पनि ।
मैले विद्वान् भनिएका, पार्टीमा पनि वरिष्ठ मानिएका एक युग पुरुषको नाम सानो उदाहरण नलिएको भए पनि हुँदो हो । तर सोच नकारात्मक भयो, अनावश्यक शङ्का गरियो भने त्यसले सिङ्गो परिस्थिति बिगार्छ भन्न खोजेको मात्र हो । त्यसो त सीपी मैनाली कुनै समय नेपाली समाजमा दन्त्यकथाको राजकुमार जस्तै हुनुहुन्थ्यो तर नामले मात्र कोही पनि महान् हुँदैन । सोच र कामले महान् बन्नुपर्छ ।
भनिन्छ, हाम्रो मन मस्तिष्कमा दैनिक ६० हजार विचार आउँछन् र जान्छन् । तीमध्ये हामी कतिको पहिचान र प्रयोग गर्न सक्छौँ । मानिसको मस्तिष्कको अहिलेसम्ममा १५% को मात्रै उपयोग भएको छ रे । मानिसको अझैm ८५% मस्तिष्कको प्रयोग हुनै बाँकी छ रे ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो सोचाइ सकारात्मक बनाउने कि नबनाउने भन्ने स्वयं व्यक्तिको सोचको कुरा हो । तर, सकारात्मकतर्फmको अभियानमा व्यक्तिलाई डोर्‍याउने घरपरिवार हो, समाज हो, स्थानीय तहको सरकार हो । प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारदेखि सरकारका नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको तहमा सकारात्मक सोच र भूमिका आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । छोराछोरीको धारणा बाबु–आमाप्रति सकारात्मक छैन । जनताको बुझाइ सरकारसँग सकारात्मक छैन । सरकार र पार्टीको बुझाइ जनतासँग सकारात्मक छैन । नेताहरूको बुझाइ एकआर्कामा सकारात्मक छैन । त्यति मात्र होइन, दैनिक सँगै बस्ने, खाने, सुत्ने लोग्ने–स्वास्नीदेखि घरपरिवार छोराछोरी बाबुआमा, आफन्त, इष्टमित्र, नेता, नेतृत्व, सरकार, सरकारी सङ्घ–संस्थाबिच नकारात्मक धारणा बढ्ने गरेको देखिन्छ ।
यिनै नकारात्मक धारणाको परिणाम हो सामाजिक द्वन्द्व । एकअर्काको अविश्वास, शङ्का र मानवमा परेको समस्या नै शङ्का र नकारात्मक सोचको विकसित रूप हो ।
अमेरिकाले नागासाकी र हिरोसिमामा बम खसाल्नु पनि त्यही हो । सद्दाम हुसेनलाई उसको देशमा बाँच्न नपाउनु पनि त्यही हो । मदन भण्डारीको हत्या पनि त्यही हो । नकारात्मक सोचको परिणति नै हो नेता–नेता र कार्यकर्ता–कार्यकर्ताबिचको असहमति । यस्तो सोच अविश्वासका कारण जन्मन्छ ।
१४ वर्ष जेल बसी ५ दशक आन्दोलनमै लागेर पार गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई ५ वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेर पार्टी र सदनले प्रधानमन्त्री बनाएको हो तर किन दुई वर्षदेखि नै पार्टीका नेताहरूलाई छटपटी भयो । हो, के.पी. ओली सधैँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनिरहने होइन, उहाँपछि अरू नै कोही बन्नु–हुनेछ । सफलतापूर्वक काम गर्दागर्दै उहाँमाथि अविश्वास ?
हो, नेता–कार्यकर्ताले गलतलाई सही मानेर जीहजुरी बजाउनु हुँदैन । उहाँका आफ्नै नभए पनि वरिपरिका कारण उहाँ विवादमा आउने गरेको जस्तो लाग्छ । हाम्रा उदार प्रधानमन्त्री सचिवालयका कारण घेरा साँघुरो बनाउने र प्रधानमन्त्रीको सहज भेटघाटलाई दुर्लभ बनाउने कारण पनि अन्य नेता–कार्यकर्ताप्रतिको अविश्वास हो । त्यसैले सफलताका लागि सबैले आ–आफ्नो सोच बदलौँ, सकारात्मक सोचको अभियान चलाऔँ, द्वन्द्व आफैँ व्यवस्थापन हुनेछ ।
Tags : सकारात्मक सोच